Tafiditra ao amin’ilay fanatanterahana ny tanjona faha-6 amin’ny fampandrosoana lovain-jafy ity fotodrafitrasa ity. Tanjona ny hampiakatra 80% ny fananana rano fisotro madio mba ho salama sy tomady ny mponina. Mbola maro ny tokantrano tsy manana toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana kanefa izany no antoky ny fahasalamana, hoy Andriamatoa minisitra. Iaraha-mahalala ihany koa fa maro ny biraom-panjakana, banky ary ny hotely fandraisam-bahiny izay mampandroso ny toekarena amin’iny toerana iny ka izany ihany koa no antony nanaovana izao fotodrafitrasa izao. Ahitana efitra fidiovana miisa 3, toeram-pivoahana 4, paompy miisa 8 ary rihana iray ity fotodrafitrasa ity.137 tapitrisa Ariary ny vola natontona tamin’ny fananganana izao toerana vaovao izao ary vehivavy misehatra amin’ny fanasana lamba miisa 150 ao amin’io fokontany io no hisitraka sy hahazo tombony manomboka izao. Ankoatra izay, mbola nizarana savony, siny ary koveta ireo vehivavy ireo